Par Taratra sur 05/06/2020
Trano iray teny Soavimbahoaka no may, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 11 ora. Raha ny fanazavan’ny manodidina, tsy fantatra ny nahatonga ny fahamaizana. Ny afo sy ny setroka niakatra no nanaitra ny mponina teny an-toerana., may nandritra ny loza ny efitra roa sy lakozia iray, hoy ny loharanom-baovao. Tsy niitatra tamin’ireo trano teny amin’ny manodidina izany vokatry ny fahatongavan’ny mpamono afo.
Kamiao iray, nandona tranon’olona, amoron-dalana teo amin’ny fiholahan’ny lalanan’i Moramanga, omaly. Olona miisa telo, indray namoy ny ainy tamin’izany. Ankoatra izay, olona iray hafa koa mbola nosokirina tao ambanin’ilay kamiao taorian’ny loza. Ity farany izay maty teo no ho eo ihany koa.
Lehilahy iray koa maty tsy tra-drano teny amin’ny lalan’i Tsarasaotra, afakomaly manodidina ny tamin’ny 07ora sy 30 mn hariva. Izy izay nitondra moto ka nofaohina fiara nandeha mafy ary nianjera avy hatrany.